We Fight We Win. -- " More than Media ": လူသတ်အစိုး ရ အဖွဲ့ သစ် ဒုဝန်ကြီး သား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်လျက်ရှိခြင်း
အင်လျားကန်ဘောင်က နေရာ ကို ခင်ညွန့် လက်ထက်က စန္ဒာခင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဆီက မတန်တဆဈေးနဲ့ ငှားရမ်းခွင့်ရခဲ့တယ်။ စိမ်းလန်းစို ပြေစားသောက်ဆိုင် ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။
စန္ဒာခင် (ခ) မေသက် ဟာ သန်းရွှေ ခရီးစဉ်တွေမှာ ချီးဂတုသေး ဂတုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာသူမဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓါတုဗေဒဌာနမှာ ကျူတာ လုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ခုနစ်မှာသူဟာ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ သူယောက်ကျား ကျော်မြင့်လှိုင် ဖြစ်တယ်။
ကျော်သက် (ဒေါ်စန္ဒာခင် သား )
မနာလိုစိတ် တကယ့်ကိုကြီးတဲ့ အတိုက်အခံတွေပါလား..
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=3233980&sk=info his account..
US government already mentioned that Sanction should remain as there is no real improvements in human right and democracy.
Banning the Junta enablers from traveling to western countries is part of the sanction too.
Thanks for the info and more people need to find out if they know such persons in their circle with concrete evidence.
ကိုမိုးသီး ကျနော်တို့လဲ ကန့်ကွက်ချင်တယ် ဘယ်နေရာကို ဘာစာပို့ရမလဲ
Such action is not jealously but it is justice.
Please try to see in place of Ma Nilar Thein's daughter. Both parents are still in prison and this child has no access to rightful parents let alone other worldly pleasure like amusements and entertainment that you sold out, washed up, and selfish people enjoy.
ပြောတော့ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး သူတို့ သားသမီးတွေကိုတော့ပြည်ပမှာပညာ သွားသင်ခိုင်းတယ် ပြောတော့ လည်းမကြိုက် ခက်တဲ့ လူတွေပဲ။ စစ်တပ်နဲ့KNU တိုက်ပွဲဖြစ်လို့စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကြားထဲက အပြစ်မဲ့ပြည်သူရာနဲ့ ချီပြီးသေရင် ဘာသတင်းမှ မထုတ်ပြန်ဘူး KNU လက်ချက်နဲ့မတော်တဆ ရွာသားတစ်ယောက်လောက်မှန်သွား ရင်တော့ရှိသမျှသတင်း စာတွေမှာရေးကြီးခွင် ကျယ်ရေးတော့ တာပဲ တော်တော်တရားမျှတမှု ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ။
Actually,Dr Chit's young daughter is living in US since many years ago and her husband is an Engineer but they are trying to reach US with their own qualifications .It is not related with their father's background .So,may be Ma May Thet's son is reaching in US by assistant of her Aunt.Ma May Thet also possess own qualifications as well as her father Dr Chit alsoaPh.D holder .Don't forget it .They get their position by their own talents .If i say so, everyone will response with rude words .But it is reality.I comment by fair and square .If US ban to study him there , they will divert to other places .Dr Chit also visited to US many times after sanction , it is not only him , other hight rank retired goverment officers are also visiting to their children in US under sanction.Because they have enough money and can send their children to US and UK since long time ago .Is it sanction affected or non-affected to them ? It is affected to Whom ?????????Funny sanction .In UN agencies in Myanmar, many staffs are relatives of military .If u want to get job at Myanmar UN offices , it is very important that "Who know u there ?"There are many cases of leakage .Very complicated and funny !!!!! If u don't know anyone from there , your applcation will be throw away .I intend to talk about , everywhere got such things including Humanitarian Development society .Like this, Dr Chit's grand-son case also the same.US embassy may know it , but they just ignore by counseller .Nowaday , who are the richest in Myanmar ?They aldy know.For example,Daw Sein Sein's son ( President of Ah Myo Tha Mee Swan Saung Shin Myar ) also lives in US and now he got married with ex-minister Gen-Pyay Sone's daugher Kalayar Pyay Wai Shan who is widow with two children .The reason is Pyay Sone want to send his grand-sons to US for studying .How about this case ??????????How about sanction?????????But,US embassy check to ordinary civilian asatheif if they try to get visa there upon reason of sanction .Shit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T4,we are shouting that sanction is not for protect to human rights , it is based on racial and they want to make divided rules .It is cheating .Please read about Collin Powel's book as he doesn't encourage to make sanction on Africa bcoz he aldy knows results .But,our Myanmar politicians are encourage sanction to make lower status to civilians thought their mouhts are saying that they very syampaty on innocent civilians .Ronald Regan also didn't like sanction on any country.It is cheating case .
မနာလိုစိတ်ကြီးတာက ငါတို့ အတိုက်အခံတွေမဟုတ် ဘူး၊ မင်းတို့ နအဖ လို့ ခေါ်တဲ့နွားကြီးများအဖွဲ့ ဖြစ်တယ်၊ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ထောင်ချခံထားရတဲ့သူ တွေရဲ့ မိသားစုတွေဆို ဘာမှလုပ်မရအောင်ပိတ်ပင်ထား မင်းတို့ တို့ တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေကွ နွားရ....ထွီ...
ခွေးမျိုးတွေ အကုန်နေရာတစ်ကာ တွေ့နေရတာ..။
There are two reasons,whyalot of people want to go to America(for money,education).Burma is producing poor human beings,and promoting greedy rich inhuman people.
There is no point to argue about Sanctions that hits ordinary citizens or those idiots.
There would not be any sanctions at the first place if the ruling people are fair to the ordinary people. End of story........................
( if you are true ordinary Myanmar citizen and know the meaning of fairness, you know what is really happening in Myanmar and the suffering of it's people )
3 April 2011 at 07:59
စန္ဒာခင်က အလန်းကြီးရှိသေးတယ်ဟ တီးချင်လိုက်တာ
In that case, Why can not promote Money & Education to producealot of rich & educated human beings for Burma, being linear with the world. We need every thing in Burma to GROW. Not just entertainment/temporary relieves.
moe thee you are hopless
nay min naing said...
ရွံ့စရာကောင်းတယ် လို့ ရေးတဲ့ကောင် မနာလိုစိတ်ကြီးတဲ့ အတိုက်အခံတွေပါလားလို့ ရေးတဲ့ ကောင် သူတို့အရည်အချင်းတွေ ကြောင့်သာ သူတို့ နေရာရပါတယ် လို့ ရေးတဲ့ မအေလိုး
မင်းလူလို တွေးပီးလူလိုရေး ကွ
မင်း နှမ တက်လိုး ပီးအဲလိုလုပ် တဲ့ နေ့ ကျရင်တောင် မင်း တို့ က အဲဒါကို ကျေနပ်နေမယ့်ကောင်တွေ ဘဲ ဖြစ်မယ် ...
စောက်ရူးတွေ . . . ကျွန်ဦးနှောက် နဲ့ . . . ကျွန်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ ဘိုလိုရေးတာကို ဂုဏ်ယူနေ တဲ့ ကျွန်တွေ ငါ မင်းတို့ ကို မြန်မာလိုဘဲ ဆဲလိုက်မယ် လီး ဘဲ ကွ . . . ငါ့ကိုမိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ထပ်ရေး ရတယ် မင်းတို့ က မိုက်ရိုင်းတာနဲ့ ဘဲ တန်လို့ မိုက် ရိုင်းတယ် လီး ဖြစ်လား . . .
Channel7 က presenter ရန်နိုင်စိုးနောင်ဆိုတဲ့လူက